नोबेलमा टाउको तथा गर्दनसम्बन्धी क्यान्सरको शल्यक्रिया
मुख्य पृष्ठसमाचार स्वास्थ्यनोबेलमा टाउको तथा गर्दनसम्बन्धी क्यान्सरको शल्यक्रिया
विराटनगर, १५ साउन । नोबेलमा टाउको तथा गर्दनसम्बन्धी क्यान्सरको शल्यक्रिया सुरु भएको छ । विशेषज्ञ शल्य चिकित्सकको व्यवस्था मिलाएर नोबेलले ‘हेड एन्ड नेक’ सम्बन्धी सम्पूर्ण क्यान्सरको शल्यक्रिया थालेको हो ।
भारतको एम्स दिल्लीबाट टाउको तथा गर्दन क्यान्सरमा एमसीएच गरेका वरिष्ठ सर्जन डा. ऋषिकेष ठाकुरलाई नोबेलले ल्याएको छ । डा. ठाकुर टाउको तथा गर्दनसम्बन्धी क्यान्सरमा एमसीएच गर्ने नेपालकै पहिलो शल्य चिकित्सक हुन् । गुणस्तरीय उपचार सेवाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक ल्याएर शल्यक्रिया थालिएको नोबेल शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ ।
मुख, थाइराइड, स्वासनली, नाकको साइनस, टाउको, ¥याल ग्रन्थी, कानलगायत टाउको तथा गर्दनसम्बन्धी सबै क्यान्सरको शल्यक्रिया थालिएको डा. ठाकुरले जानकारी दिए । ‘नोबेलमा टाउको तथा गर्दनसम्बन्धी सबै किसिमका क्यान्सरको शल्यक्रिया थालेका छौ ।’ डा.ठाकुरले भने, ‘म टाउको तथा गर्दनसम्बन्धी क्यान्सरमा एमसीएच गर्ने नेपालको पहिलो सर्जन पनि भएकाले मुलुककै उत्कृष्ट सेवा दिने हिसावले लागेका छौं ।’
नोबेलले सेवामा स्तरीयता बढाउनका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक र अत्याधुनिक उपकरण थप्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । सेवा थप गर्दै आएको नोबेलले केही महिना अघिबाट स्त्रीजन्य सबै किसिमका क्यान्सरको पनि शल्यक्रिया थालेको छ ।